Curiye: Yuusuf Sh. Cumar ( Kawnayn)
Yuusuf Sh. Cumar ( Kawnayn)
Curiye: Yuusuf Sh. Cumar
Maansadaan la magac bacday Doontii waxbarashada, waxaa curiyay Yuusuf Sh. Cumar ( Kawnayn), oo ku nool magaalada Melboune ee waddanka Australia. Waxay maansadani taxanaha ku soo biirtay 20 Sebteembar 2004, waana maansadii 20aad ee Doodwanaag.
Maansadu waxay diiradda saartay arrimaha waxbarashada, iyadoo uu curiyaha maansadu u arko in aqoondarridu ay aabbe u tahay dhibaatooyinka maanta ummadda la soo gudboonaaday, iyo musiibooyinka qarada wayn ee ay ummaddu garan la'dahay jiho ay uga dabaalato. Wuxuuna xusay dhibaatooyinka ay aqoon-darridu leedahay, iyo sida ummadaha aan aqoonta lahayni ay mar walba u yihiin ummado dullaysan oo dullinnimo ku jira!.
Abwaanku waxa uu ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay aadaan Dugsiyada, aqoontana ay ku dadaalaan. Wuxuuna tilmaamayaa in doonta waxbarashada dusheeda looga badbaadi karo musiibooyinka soo fatahmaya. Aqoon la'aantu waa iftiin la'aan. Haddii ay aysan ummadi aqoon lahaynna, ma kala garan karto waxa wanaagga ah iyo waxa xummaanta ah ee dumminaya.
Duruustiyo cilmiga iyo
Khayrku uu durdurayuu
Nin waliba dareenkii
Wuxuu daawo moodiyo
Danta guud ku sheegoo
Taladana ku daabacay.
Dadaalkaas lawado ee
Abwaanadu ku deeqeen
Runtii waan ku diirsaday
Dulmi iyo xummaan iyo
Laga dhowray deel-qaaf
In aan dego god dihin oo
Dadkaygana digniin iyo
Bal in ay dulfuulaan
Dhanbaal oogu soo diro.
Markaan taas ka soo dego
Haddii ay dad badan oon
Sida loo dabaashiyo
Garanaynin daad raac
Doon baa maciinoo
Dadka lagu badbaadshaa
Dan haddaad kaleedahay
Docda kale badwayntiyo
Doonbaad wacdaa ood
Dantaadii ku gaartaa
Haddaad baahi daran iyo
Doon baad kortaa ood
Kalluunkii ku dabataa
Khayraadka dihin iyo
Dahabkana ku gurataa
Dalka aan badwayn oo
Daafahiisa laga helin
ku dejinnin badeecoo
Dacalkeed ku soo xiran
Dawladnimo ka dheeroo
Waddamada la deriskuu
ka dalbaa gargaaroo
u daldala alaabtoo
Doolar iyo canshuur iyo
Dulsaar buuna bixiyaa
Dulliguna u sii dheer.
Aan dooxo hadalkee
Dulucdiisu waxay tahay
Waa doon waxbarashoo
Dadka lagu badbaadshaa.
Waa dabkaa cadceeddiyo
Dugsi laga galaa oo
Noo dooray Eebbee
Dhiiggeena lagu daray
Billowgeedi soo degay
Darajooyin sare bay
Cilmigii u doortoo
Dad ku kala sareeyaan.
Qofka aan dugsiga iyo
Da’diisuu ka gaabshaa
Dantiisana ma gaaroo
Illaa iilka lagu dado
Dulli buu ahaadaa.
Qofka aan dulfuulayn
Noloshuu ka degiyoo
Dawarsuu ku noollaan
Daxal baa ka fuuloo
Damiin lagu qoslaa iyo
Docjiif buu ahaadaa
Dadka uu la joogana
Danna kama galaan oo
Naftiisii u dooroo
Aqoontoo la doorbido
Qalbigay daweeyn oo
Daahaa madow iyo
Daxalkaa ku gaaray
Dufan iyo saliid iyo
Diib lagu bogsoodoo
Deg-deg ugu shubaayaan.
Laga wada durduurtaa
Dareenkana wanaag iyo
Kalsoonaa ku duxatoo
Niyadaaba kuu degi.
Docda kale ku eegee
Ummad aan dadkeedii
Doonitaanka sare iyo
Darajaba ku gaartaa?
Ummad aan dirkoor iyo
Sidee bay dariiq wacan
U helaan dadkeed oo
Dunidana ku gaaraan?
Aqoon waa difaac iyo
Derbi aan la jebin oo
Ummaddii dugsiga iyo
Ku dadaasha qalinkaba
Dayrkeeda cadaw iyo
Dabadhilifku muu galo.
Aqoon duunyo weeyoo
Daraasooyin badan iyo
Cagahooda daba taal
Dalalkoo dhan hagiyoo
Masallaha ladaba dhigan
Xidigaha u duuleen
Dayaxana ku gaareen
Jahli baan u doornoo
Dilid iyo afduub iyo
Dumarkii la xoogay
Darajooyin sare iyo
Dallacaad ku gaareen
Hoobiyaan ku duminnoo
Wax aan dunidu maqalbaa
Guryaheenni soo degay.
Daadshaay qoryaha oo
Aan danteenna gaarnee
Aan dugsiga aqoontiyo
Dockastaba ka taagnee
Dumar iyo raggeennaba
Dadow yaan la kala harin.
War diyaar garoobaay
Aan daynta nagu maqan
Dadkeennii u celinnee
Dadow yaan lakala harin.
Aan doon aqooneed
Dariiq toosan marinnee
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 25, 2004